Kutheni UThixo Evumela Ingcinezelo Nokusetyenziswa Kakubi Kwegunya?
FUNDA NGOLUNYE ULWIMI ISepedi ISilozi ISpanish Isi-Iban Isi-Iceland Isi-Iloko Isi-Indonesia Isi-Itali IsiAlbania IsiAmharic IsiArabhu IsiArmenia IsiAymara IsiBengali IsiBhulu IsiBislama IsiBulgarian IsiCatalan IsiCebuano IsiChichewa IsiChitonga IsiChitumbuka IsiCibemba IsiCreole saseHaiti IsiCroatia IsiCzech IsiDanish IsiDatshi IsiEfik IsiEstonia IsiEwe IsiFinnish IsiFrentshi IsiGa IsiGeorgia IsiGreenland IsiGrike IsiGuarani IsiGujarati IsiHebhere IsiHiligaynon IsiHindi IsiHungary IsiJamani IsiJapan IsiKannada IsiKazakh IsiKikaonde IsiKikuyu IsiKiluba IsiKinyarwanda IsiKirghiz IsiKirundi IsiKisi IsiKisonge IsiKongo IsiKorea IsiKrio IsiLatvia IsiLingala IsiLithuania IsiLuganda IsiLuo IsiMakedonia IsiMalagasy IsiMalayalam IsiMaltese IsiMarathi IsiMaya IsiMongolia IsiMyanmar IsiNepali IsiNgabere IsiNgesi IsiNorway IsiNyaneka IsiNzema IsiOromo IsiOtetela IsiPapiamento (saseAruba) IsiPapiamento (saseCuraçao) IsiPersi IsiPhuthukezi IsiPolish IsiQuechua (saseBolivia) IsiRashiya IsiRomania IsiSango IsiSerbia IsiSerbian (saseRoman) IsiShona IsiSinhala IsiSlovak IsiSlovenia IsiSranantongo IsiSuthu (Lesotho) IsiSwahili IsiSwedish IsiTagalog IsiTahiti IsiTajiki IsiTamil IsiTatar IsiTelugu IsiThai IsiTigrinya IsiTshayina SaseMandarin (Esenziwe Lula) IsiTshayina SaseMandarin (Esiqhelekileyo) IsiTshiluba IsiTsonga IsiTswana IsiTurkish IsiTuvaluan IsiTwi IsiTzotzil IsiUkrainian IsiUmbundu IsiUzbek IsiVenda IsiVietnam IsiXhosa IsiYoruba IsiZulu isi-Igbo
Kutheni UThixo Evumela Abantu Abanegunya Bacinezele Abangenalo?
IBhayibhile ithetha ngeziganeko ezibuhlungu zokucinezelwa kwabantu abangenagunya ngabo banalo. Sinokucinga ngemeko kaNabhoti. * UAhabhi, omnye wookumkani bakwaSirayeli ngexesha lokubhalwa kweBhayibhile wavumela umfazi wakhe, uIzebhele, ukuba abulale uNabhoti noonyana bakhe ukuze lo kumkani afumane isidiliya sakhe. (1 Kumkani 21:1-16; 2 Kumkani 9:26) Kwakutheni ukuze uThixo avumele ukusetyenziswa kakubi kwegunya ngolu hlobo?
‘UThixo akanakuxoka.’—Tito 1:2
Makhe siqwalasele esi sizathu sibalulekileyo: UThixo akanakuxoka. (Tito 1:2) Oku kunanto yakwenza ngantoni nokucinezelwa kwabantu? Kwasekuqaleni, uThixo wabalumkisa abantu ukuba ukumvukela kuya kuba nomphumo obuhlungu—ukufa. Kanye njengokuba uThixo wayetshilo, abantu bebesifa ukususela kwimvukelo eyenzeka kumyezo wase-Eden. Kwaumntu wokuqala wafa ngenxa yengcinezelo—xa uKayin wabulala umntakwabo uAbheli.—Genesis 2:16, 17; 4:8.
Ukususela ngoko, xa iLizwi likaThixo lithetha ngembali yabantu liyishwankathela ngolu hlobo: “Ngexesha athi umntu alawule umntu iba kukwenzakala kwakhe.” (INtshumayeli 8:9) Ngaba la mazwi aye ayinyaniso? UYehova wabalumkisa abantu bakhe amaSirayeli ukuba babeya kucinezelwa ngookumkani babo baze bakhale kuye. (1 Samuweli 8:11-18) Nkqu nokumkani onobulumko uSolomon wayebacinezela abantu bakhe ngokubasebenzisa nzima. (1 Kumkani 11:43; 12:3, 4) Ookumkani ababi, njengoAhabhi, babecinezela nangakumbi. Khawucinge ngoku: Ukuba uThixo wayekuthintele ukucinezelwa kwabantu ngabanegunya, wayengayi kungqineka elixoki?
‘Umntu uye walawula umntu yaba kukwenzakala kwakhe.’—INtshumayeli 8:9
Khumbula ukuba uSathana uthi abantu bakhonza uThixo kuba befuna iingenelo. (Yobhi 1:9, 10; 2:4) Ukuba uThixo ebekhusela bonke abakhonzi bakhe kuko konke ukucinezelwa, ngaba oko bekungayi kungqina izityholo zikaSathana ziyinyaniso? Ukuba uThixo ebekhusela wonke umntu kwingcinezelo, bekungayi kuthiwa ulelona xoki libalaseleyo? Xa bekhuseleke ngolo hlobo, abaninzi bebeya kucinga ukuba abantu banako ukuzilawula ngokuphumelelayo engekho uThixo. Kodwa iLizwi likaThixo lithetha into eyahlukileyo—lithi umntu akanako ukuzilawula. (Yeremiya 10:23) Yiloo nto sifuna uBukumkani bukaThixo bufike, ukuze buphelise ingcinezelo.
Ngaba ke oko kuthetha ukuba uThixo akenzi nto ngengcinezelo? Akunjalo. Cinga ngezinto ezimbini azenzayo: Okokuqala, akukho nto ayifihlayo ngengcinezelo. Ngokomzekelo, iLizwi lakhe lichaza yonke into ngeyelenqe uIzebhele awalenzela uNabhoti. IBhayibhile ikwachaza ukuba izenzo zobubi ezinjengezi ziphenjelelwa ngumlawuli onamandla ozifihlayo ukuba ungubani. (Yohane 14:30; 2 Korinte 11:14) IBhayibhile ithi nguSathana uMtyholi. Ngokusichazela ngobungendawo nengcinezelo kwakunye noyena nobangela wezi zinto, uThixo usinceda ukuba singenzi okungendawo. Ngaloo ndlela usinceda sifumane ubomi obungunaphakade.
Okwesibini, uThixo usinika ithemba eliqinisekileyo lokupheliswa kwengcinezelo. Ukubhenca, ukugweba nokohlwaya kwakhe uAhabhi noIzebhele—nabanye abaninzi abanjengabo—kuyasiqinisekisa ukuba ngenye imini uya kubohlwaya bonke abenzi bobubi. (INdumiso 52:1-5) UThixo usithembisa nokuba uya kulungisa wonke umonakalo obangelwe bubungendawo kwabo bamthandayo. * Ngenxa yoku, uNabhoti othembekileyo uya kubona xa yena noonyana bakhe beya kuphila ngonaphakade kwiparadesi esemhlabeni enobulungisa.—INdumiso 37:34.
^ isiqe. 3 Funda inqaku elithi “Xelisa Ukholo Lwabo” kwakule Mboniselo.
^ isiqe. 8 Funda isahluko 11 sencwadi ethi Yintoni Ngokwenene Efundiswa YiBhayibhile? epapashwe ngamaNgqina kaYehova.